कांग्रेसमा मन्त्री छान्न गुटहरुमा फाइनल हुँदै,को-को छन लाइनमा ? - Top Nepal News
काठमाडौं,साउन ११ । सरकार गठनका लागि गृहकार्यमा रहेका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनमा प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा पार्टी र सरकारमा आफ्नो समुहका लागि दावी गरेका छन्। पौडेलको यो दावी पछि शेर बहादुर देउवाले सरकार गठनका बारेमा थप परामर्श शुरु गरेका छन्। नेता पौडेलले महाधिवेशनमा ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएका थिए। अघिल्लो पटक शेर बहादुर देउवाले सरकार र पार्टीमा भाग जसरी भाग पाउँथे त्यसैगरि आफ्नो समुहलाई पनि भाग चाहिने दावी पौडेलले स्पष्ट रुपमा देउवासँग राखेका हुन्। चुनावमा ६० र ४०को भागवण्डा अन्त्य गर्ने नारा दुबै नेताले गरेपनि महाधिवेशन पछि भने त्यसको पुनरावृती हुन खोजेको छ।
देउवासँग उनकै निवास बुढानीलकण्ठमा भएको भेटमा दुई नेतावीच मन्त्रीमा आफू निकट नेताहरुलाई पठाउनेवारे मात्रै छलफल समिति भएन। उनीहरुबीच मनोनयन हुन बाँकी रहेको ११ सदस्यीय केन्द्रिय समितिमा समेत भागवण्डा गर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो।
पौडेल पक्षले ४५ प्रतिशत दावी गरेको छ। यो दावीलाई देउवाले स्विकारे काँग्रेसको भागमा पर्ने भनिएको १२ मन्त्रालयमा आफ्नो पक्षलाई कम्तिमा ५ वटा दिनुपर्ने पौडेलको दावी छ। गृहसहित स्थानीय विकास, परराष्ट्र, शिक्षासहितका १२ मन्त्रालयमा काँग्रेसको दाबी छ। माओवादीले भने ८ मन्त्रालय पाउने सहमति छ। तर १२ र ८ मा सैद्धान्तिक सहमति भएपनि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने बारेमा काँग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीबाट कृष्ण बहादुर महरा र बर्षमान पुन अनन्त थप गृहकार्यमा लागेका छन्। यो छलफलमा थप केहि दिन लाग्न सक्छ। यसपछि दलभित्रै पनि गुटहरुको स्वार्थ मिलाउन पनि दुबै दलमा माथापच्ची हुने देखिएको छ। खासगरि काँग्रेसभित्र महाधिवेशनताका रहेको देउवा समुह भित्रको उपगुटहरुको व्यवस्थापन उनलाई टाउको दुखाइ भएको छ। पौडेलको दावीले पनि उनलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने आफैलाई सहयोग गरेका खुम बहादुर खड्काले दिएको दवाव पनि उनलाई सरकार गठनका बेला मन्त्रीको नाम टुङगो लगाउन थप जटिल बनाइरहेको छ। महाधिवेशनमा दोस्रो चरणमा सहयोग गरेका कृष्ण प्रसाद सिटौलाका कुरा टार्न सक्ने अवस्थामा पनि देउवा छैनन। यसकारण पनि अबका ५ दिन देउवाका लागि दवावको समय रहनेछ। तर यसबाट तत्कालका लागि राहत पाउन पहिलो चरणमा केहि बरिष्ठहरुलाई मात्र मन्त्री बनाएर पठाउनेमा देउवा रहेका छन्। यसका लागि पहिलो चरणमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्नेमा व्यापक विमर्शमा देउवा लागेका छन्।
सरकार गठनको बाटो खुलेसँगै काँग्रेसभित्र यो पटक नयाँ अनुहारहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दवाव परिरहेको छ। पुराना र नयाँ अनुहार मिलाएर मन्त्री बनाउन पनि यसअघी मन्त्री भइसकेकाहरुको पनि दवाव छ। तर शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भइसकेकाहरुलाई भने मन्त्री बनाउन नहुने दवाव देउवालाई छ। अहिले मन्त्री बन्नका लागि गुटहरुमा पनि व्यापक गृहकार्य भइरहेको एक नेताले बताए।
को को छन मन्त्री बन्ने लाइनमा ?
पार्टीका तर्फबाट विमलेन्द्र निधी, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिह केसी र गोपालमान श्रेष्ठको नाममा अझै टुङगो लाग्न सकेको छैन्। नेतृत्वका लागि नाम टुङगो नलागेपनि मन्त्रीका लागि भने केहि नामहरुको चर्चा व्यापक छ। जसमा अर्जुननरसिह केसी अगाडी छन्। त्यसैगरि सितादेवी यादव, शेखर कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, प्रकाशसरण महत, रमेश लेखक, पुष्करनाथ ओझा, चन्द्र भण्डारी, दिपक गिरी, जीवन बहादुर शाही, सुधिरकुमार शिवाकोटी मन्त्री बन्नेमा अग्रपङतिमा छन्। त्यसैगरि डिल्ली चौधरी, भरतकुमार शाह, कमला पन्त, महालक्ष्मी उपाध्याय, मानबहादुर विश्वकर्मा, वीर बहादुर बलायर, मिन विश्वकर्मा, फरमुल्लाह मन्सुर, पद्मनारायण चौधरी, सुर्यमान गुरुङ, तारामान गुरुङ, मिन विश्वकर्मा, अमृत अर्याल, अम्विका बस्नेत, इश्वरी न्यौपाने, ध्यानगोविन्द रञ्जित, तप्त बहादुर बिष्ट, शंकर भण्डारी, राजु खनाल, केशव कुमार वुढाथोकी, बहादुर तामाङ र सिलु खड्का लगायतको नाम पनि निकै चर्चामा छ। यि नामहरुबाटै मन्त्री सिफारीस हुने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको दावी छ। कतिपयलाई भने राज्यमन्त्री समेत बनाइने छ।